Xhumana: Khulisa Inethiwekhi Yakho ROI | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 24, 2014 Douglas Karr
Ukuphatha ubudlelwano namathemba akho namakhasimende kuyimpi enkulu uma kukhulunywa ngokugcinwa nokutholwa. Ngenkathi ukubuyiselwa kotshalomali kumnandi kumakhasimende ethu, ukuwasiza ngombono, izeluleko zepulatifomu, futhi nokuba yisixhumi sezindaba zezimboni, ucwaningo lokuncintisana, abanye abathengisi kanye nabafakizicelo bemisebenzi ngokuvamile kubaluleke kakhulu futhi kubalulekile kubo.
I-CRM ejwayelekile inamandla okurekhoda amaphoyinti okuthinta weqembu lakho - kepha akusho ukuthi aqhube ikhaya elinomsoco. Ukuxhumana kuhlose ukusiza amabhizinisi ukuthi alandele abantu abafanele, ngesikhathi esifanele, ukukhulisa ubudlelwane be-ROI ngokusebenzisa ukugcinwa okuthuthukisiwe, ukutholakala kanye nezindawo zokuthinta zokudlulisela.
Dashboard - Phatha futhi ulandelele wonke umsebenzi wokwakha ubudlelwane bakho futhi ubone zonke izikhumbuzo zakho zansuku zonke zokulandela kanye nezenzo futhi wazi kahle ukuthi ngubani okudingeka ukulandelela usuku ngalunye. Landelela inqubekelaphambili yakho yokwakha ubuhlobo nezibalo zamasonto onke kanye nebanga lakho lobudlelwano ukuze wazi kahle ukuthi umi kuphi.
Izifanekiso ze-imeyili - Bandakanya oxhumana nabo ngemiyalezo usebenzisa izifanekiso ezakhelwe ngaphakathi zikuvumela ukuthi ugcine imilayezo yakho esebenza kahle kakhulu uma kuyisikhathi sokulandelela. Izinkambu ezinamandla zinika amandla izifanekiso ukuthi zigcwalise ngokuzenzakalela umlayezo wakho ngemininingwane yomuntu siqu yabamukeli bakho.
Ukwabiwa kwendatshana - Faka inani ngokwabelana ngama-athikili ngethuluzi le-Contactually in-browser lokulawula ama-athikili, amavidiyo, okuthunyelwe kwebhulogi namanye amasayithi kunethiwekhi yakho ngomyalezo owenzelwe wena.
I-Intro Maker - Yenza izingeniso phakathi kwabantu kunethiwekhi yakho ngokuthumela izincazelo zakho nedatha yomuntu ngamunye yokuxhumana kubo bobabili abamukeli ngasikhathi sinye.
ScaleMail - Thumela imilayezo eyenziwe yaba ngeyakho koxhumana nabo abangafika kwabangu-250 usebenzisa izinkambu nezifanekiso ezigcwalisa ngokuzenzakalela Ngaphambi kokuthumela, ungangeza amanothi ngamanye ngaphakathi kwe-imeyili ngayinye ukuze uthinte umuntu uqobo.
Izinhlelo - vumela wena ukusetha uchungechunge lwezenzo noxhumana naye noma iqembu elithile isikhathi esithile, ngokuzenzekelayo noma ngokuvuma kwakho.
Amapayipi - Bona amadili akho ngeso lengqondo bese ubeka phambili imizamo yakho ngokubonisa ukuthi yimaphi amaphrojekthi akwezigaba zepayipi lakho. Ithuluzi likuvumela ukuba ubone ngeso lengqondo amadili akho kusuka ekuvulekeni kuya ekuvalweni ngokuya ngezigaba zakho ezenziwe ngezifiso, futhi kukhombisa ukuthi yimaphi amadili angahle awele imifantu.
Ukuphathwa koxhumana nabo - Uma ubhalisela i-Contactually, uzoxhuma ngqo i-imeyili yakho, amaphrofayli ezokuxhumana nabantu kanye ne-smartphone kungxenyekazi yethu. Lokhu kuvumela i-Contactually ukuthi ikwenzele ngokuzenzakalela imininingwane yakho yokuxhumana ngaphandle kokufakwa mathupha ohlangothini lwakho.
Umsebenzi weqembu - Bheka inqubekela phambili yomuntu ngamunye neyethimba uma kuziwa ekuxhumaneni nabaphathi. Bona ukuthi bangaki oxhumana nabo osebenzisana nabo nokuthi bangaki oxhumana nabo kuleli sonto.
Izabelo zeqembu - nika oxhumana naye koxhumana naye futhi yena kuphela ozothola izaziso zokulandelela zalowo oxhumana naye, kwakheke ubunikazi bangempela bokuxhumana.
Yabelana ngamabhakede - Hlanganisa ngokukhululekile amabhakede akho namabhakede eqembu lakho ukuze amarekhodi wakho wokuxhumana afanele kakhulu ahlale esesikhathini.
Tags: oxhumana nayeCRMdoyenza i-crmGoogle +Highriseukhulisasalesforceamaphuzu okuthinta
Feb 24, 2014 ngo-10: 06 AM
Okuthunyelwe okuhle, Douglas! Futhi ngiyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ukubhala lokhu!